by Larissa Scharf အာဟာရပညာရှင် Rio de Janeiro
စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးနှင့်အထောက်ခံဆုံးကစီဓာတ်ဖြည့်စွက်စာများထဲမှ dextrose အကြောင်းအားလုံးကိုလေ့လာပါ။ အဆီကျသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၎င်း၏စျေးနှုန်းနှင့်အခြားများစွာသောအရာအတွက်၎င်းကိုရှာဖွေပါ။
Palatinosis - စွမ်းအင်ကိုတစ်နေ့လုံးထုတ်ပေးသော Carbohydrate!
စက်တင်ဘာလ 26, 2018
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြည်းဖြည်းချင်းထွက်လာတဲ့ Palatinose, glycemic အညွှန်းကိန်းနိမ့်သောဘိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ ၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုလေ့လာရန်၊ မည်သို့ယူရမည်၊ မည်သည်အရာအတွက်၎င်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်ဝယ်ယူရန်နှင့် ထပ်မံ၍ ရယူရန်လိုအပ်သည်ကိုလေ့လာပါ။
Waxy ပြောင်းဖူး - ပြီးပြည့်စုံတဲ့လမ်းညွှန်။ ဘာလဲ၊ ဘာအကျိုးကျေးဇူးလဲ၊ ဘယ်လိုသုံးရမလဲ
စက်တင်ဘာလ 10, 2015
O Waxy Maize pode ser considerado uma revolução no mercado de suplementos alimentares, quando suas características superam as necessidades nutricionaiseauxiliam na performance. Por suas características, o waxy maize tem substituídoamaltodextrina ou mesmoadextrose, carboidratos tipicamente… ဆက်ဖတ်ရန် "Waxy ပြောင်းဖူး - ပြီးပြည့်စုံတဲ့လမ်းညွှန်။ ဘာလဲ၊ ဘာအကျိုးကျေးဇူးလဲ၊ ဘယ်လိုသုံးရမလဲ
ပရိုဇစ်အားကစားမှ Waxy ပြောင်းဖူး, ဖြည့်စွက်ခြင်းမှအဘယ်အရာကိုမျှော်လင့်?
ဒီဇင်ဘာလတွင် 26, 2014
No mundo da musculação, quando se fala em carboidrato de rápida absorção, logo lembramos da maltodextrinaeda dextrose. Porém nos últimos anos, é sabido que carboidratos simples, como os dois citados, não são mais os ideais para o corpo… ဆက်ဖတ်ရန် "ပရိုဇစ်အားကစားမှ Waxy ပြောင်းဖူး, ဖြည့်စွက်ခြင်းမှအဘယ်အရာကိုမျှော်လင့်?
စက်တင်ဘာလ 30, 2013
Durante anos utilizou-seamaltodextrina para diversas finalidades, em especial, no ramo atlético com o fundamento de reposição energética ou fornecimento rápido de energia. Entretanto, com o passar dos anosecomarevolução dessa nova onda de inúmeros suplementos… ဆက်ဖတ်ရန် "Maltodextrin: သတိထားမိခဲ့ကြသောတန်ဖိုးရှိဖြည့်စွက်